အိမ်မှာအလုပ်ချိန်များလွန်းလား ရပ်တန့်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း ... | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇူလိုင်လ 16, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီညငါ့အလုပ်မှာငါ့လက်ပ်တော့ပ်အတွက် power supply ကိုထားခဲ့တယ်။ ငါမှာ power supply နှစ်ခုရှိတယ် (နောက်ထပ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုကတော့အမြဲတမ်းအပိုဝယ်လိုက်သည်!) ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတစ်ယောက်က fritz ကိုသွားသည်။
ငါဒီ post ကိုရေးနေတုန်းအလုပ်တချို့လုပ်ဖို့ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်ကျန်ခဲ့တယ်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါ့မှာအိမ်မှာတခြားကွန်ပြူတာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်တော့ပ်နဲ့တူတူပဲ။ ဒီညငါပြေးနေမယ်
ကုမ္မဏီတစ်ခုကသူက spaghetti ကုဒ်လား၊ မသုံးသင့်လား၊ မပေးဆိုတာငါ့လမ်းညွှန်ချက်ရဖို့ငါ့ဆီပို့လိုက်တဲ့ကုဒ်အချို့ကိုပြန်ကြည့်ပါ။
သော PHP ပြိုင်ပွဲကိုအပြည့်အဝစီရင်ခြင်း မနေ့က.
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသောစီမံကိန်းအတွက် Stephen မှပြီးခဲ့သည့်စာမျက်နှာအပြင်အဆင်အချို့ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။
ငါ၏အအချို့ကိုတိုးမြှင့် Continue WordPress ကို plugins ကို.
ထိုအသင်၌ရှိသည် ... ယခုငါဒီ post ကိုရေးသားပြီးနောက်2နာရီပြားချပ်ချပ်ရှိသည်! ဒါကြောင့်အဆုံးကတော့ - သင့်ရဲ့ power supply ကိုအလုပ်မှာထားပါ။ အိမ်၌သင်၏အလုပ်ကိုပြီးမြောက်ရန်သင်၏အချိန်သည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။
Blog-Tipping: Egg Marketing ဘလော့